HIFEM Muscle Building Factory - China HIFEM Akwara ụlọ Manufacturers, Suppliers
obere mkpịsị Isi sculpting muscle ems tesla sculpt machine
Workingkpụrụ Ọrụ Arụ ọrụ akwara a mara mma na-eji teknụzụ na-enweghị mbuso agha nke ikuku electromagnetic gbasiri ike iji hapụ ike magnetic vibration site na usoro ọgwụgwọ abụọ iji banye akwara na omimi nke 8cm, ma mee ka mgbatị na mgbatị ahụ na-aga n'ihu. nweta ọzụzụ dị oke elu, iji mekwuo uto nke myofibrils ma mepụta ụdọ nkwonkwo ọhụrụ na akwara akwara, si otú a na-azụ ma na-arịwanye elu ahụ ike na v ...
Portable High Frequency teslasculpt Hi-Emt Isi Akwara Nkpali ems sculpt Machine
Kedu ihe bụ EMS SCULPT? Kacha ọhụrụ desgin EMS scuplt Isi slimming High siri ike Pulsed akpa (HIPEM) technology maka ahu slimming, firming na abụba ọkụ. Ngwaọrụ ọkachamara maka salons mara mma na ndị dibia chọrọ ịnye ndị ahịa ha ihe kachasị ọhụrụ na ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ na-agwọ ọrịa EMScuplt Isi na-eme ka ahụ sie ike ma na-agbacha abụba n'otu oge ahụ. Mkpụrụ osisi electromagnetic na-eme ka mkpịsị akwara nke kachasị dị ike nke na-eme ka anụ ahụ megharịa, leadi ...
2021 Kacha ọhụrụ Portable Mee Akwara akụrụngwa
Olee otu o si aru oru? Mwepu afọ ofufo nwere ike ime ka ọchịchọ maka ume si na mkpụrụ ndụ abụba. Epinephrine a na-ewepụta na-egosi mkpụrụ ndụ abụba ịmalite lipolysis. Mbelata nke kachasị ike na-akwalite mwepụta nke adrenaline na-akpalite mmetụta cascade na-eduga na mkpụrụ ndụ abụba nke lipolysis. Fatty acids (FFAs) na-erubiga ókè na-akpata nkwụsịtụ cell na ntinye nke apoptosis - ọnwụ cell. Mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ na-ada ma na-apụ apụ n'ụzọ nkịtị. Kpụ ọkụ n'ọnụ supramaximal contractionsstimul ...
EC kwadoro 4 Isi Isi Isi Akwara Owuwu Mwepụ Abụba Emslim Ngwa
Usoro ọgwụgwọ dị iche iche Akwadoro iji mpaghara Ogwe aka, apata ụkwụ, ụmụ ehi Afọ, buttocks, thighs Differentkpụrụ dị iche: Usoro ọgwụgwọ 1. 2-3 ugboro n'izu, 4-6 ugboro dị ka usoro ọgwụgwọ. 2. Usoro ọgwụgwọ 4-6 kachasị mma. Dabere na ọnọdụ ahụ onye ahịa ahụ, ndị buru ibu ma ọ bụ ndị na-emega ahụ ogologo oge nwere ike ime ka usoro ọgwụgwọ ahụ dịkwuo elu. 3. Mmetụta kachasị mma bụ izu 2-4 mgbe ị gwọchara ya. Peoplefọdụ ndị mmadụ ga-enwe ahụ ike mgbe ha mechara 4. ...
Hi-Emt 4 isi EMS ahụ na-akpụzi akwara mara mma
Uru anọ Anọ 4 treament isi maka ozuzu ọzụzụ ahụ dum 49500times na-akụkọta ahụ ike na 30minutes 100HZ ugboro ole na ole 7 Telsa ike dị elu Magshape Igwe iwebata nkọwapụta Nkọwa electromagnetic (Energy) 0-7tesla Mmepụta ike 4300W Frequency F1: 1-10Hz F2: 1-100Hz Pulse wide 300us Voltaji AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz Sistemụ Usoro Egwuregwu mode ledị Nwayọọ Professionaldị Ọkachamara Ọnọdụ ihuenyo Ihuenyo 12 nke 16 ： 9 Treatment 9 Ọgwụgwọ njikwa 4 ejiri igwe ...
4 ejiri magshape muscle ụlọ igwe
Magshape bụ ihe na-akpụzi akụkụ ahụ na ngwa nrụrụ arụ. Okwesiri maka slimming, shaping, inweta akwara, na-agbaze abụba, na-eme ihe eji eme akwa ma na-ebuli elu，dị mma maka ahụ ike.
Ems Factory N'ogbe Akwara Sculpt ọkụ Abụba Ems Isi akpụ Machine
Iji igwe ems Magshape mee ihe nwere ike ime ka ihe di ike iji mee ka akwara di ike, tinyere akwara afọ nke akwara ukwu (akwara akwara nke akwara, akwara ozo, akwara akwara, akwara abdominal) na obere ihe omimi na obere akwara . Mkpụrụ akwara nwere ike ichebe ọkpụkpụ azụ, Nọgide na-enwe nkwụsi ike nke akpati ahụ, jigide ọnọdụ ziri ezi, melite ikike ịmegharị ma belata ohere nke mmerụ ahụ, nye nkwado nhazi ...
EMSCULPT akwara ụlọ na ahụ slimming Machine
Ojiji nke HI-EMT: Uzo di iche iche nke na-adighi ekwe ka akwara zuo ike n'etiti ihe ndi ozo,
kpụzi akwara na-eme mgbe anụ ahụ na-eme ugboro ugboro
ekpughere ọnọdụ ndị a dị elu.
Nnyocha egosiwo na oke ahụ ike afọ na-abawanye site na nkezi nke 15-16% otu ruo ọnwa abụọ mgbe ọgwụgwọ HI-EMT gasịrị.
Akwara Building Ọkụ Abụba magshape igwe
Gbado anya na aru na-akpụzi na Akwara
Magshape bụ ihe na-akpụzi akụkụ ahụ na ngwa nrụrụ arụ. O adabara slimming, ịkpụzi, inweta akwara, na-agbaze abụba, na-eme ihe eji eme akwa ma na-ebuli elu hips ， maka ahụike.
Ọ bụ karịsịa irè n'ihi na buttocks na afo. Ọ na - eji teknụzụ teknụzụ elektrọnik (HIFEM) elebara anya nke ukwuu iji kpalite mgbawa dị mkpirikpi nke mgbatị akwara siri ike, na-ebute
enwekwu ahụ ike, belata olu, nghọta doro anya na ụda dị mma.
Ọ bụ naanị ụzọ iji nyere ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke aka ịzụlite akwara ma gbaa abụba ọkụ, ọ bụkwa ụzọ izizi ebumnuche ụwa nke ibuli úkwù.
EMSculpt Building Akwara Machine
Iche Iche NA AH SH akpụzi, Akwara ụlọ na-efu ibu
obere EM-sculpt muscle ụlọ igwe
Magshape EM-kpụrụ HIFEM akụrụngwa akụrụngwa
Ọ bụ karịsịa irè n'ihi na buttocks na afo. Ọ na - eji teknụzụ teknụzụ electromagnetic (HIFEM) elebara anya dị ukwuu iji kpalite mgbapụta dị mkpirikpi nke mgbatị ahụ siri ike, na-ebute njupụta ahụ ike, belata olu, nghọta doro anya na ụda dị mma.
Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Ems Akwara mkpali Machine, otutu mwepụ mwepụ, Ọrịa Co2 Laser, Co2 Fractional Laser Machine, Shr Ipl Opt,